पुरुषले महिलाको कुन–कुन अङ्गको ख्याल गर्छन् ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / पुरुषले महिलाको कुन–कुन अङ्गको ख्याल गर्छन् ?
admin January 5, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 117 Views
आँखाः-वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, न’शालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आकर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् ।
Previous समाचार डि-भोर्स पछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन नेवारको कथा !
Next ५० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि जवान अभिनेत्री मलाइकाको यही बोटल हो राज, आखिर यो के छ !